Ufmaan Qubeeffannoo Mirkaneessuu
Qubeeffannoo mirkaneessaa, yammuu jechoota dogongoraan barreessitu ofumaan LibreOffice irraa sarara daddabaa diimaadhaan argachuu nidandeessa.
Yeroo barreessa aka ufmaan qubeeffannoo mirkaneessuu
Jecha warra sarara daddabaa diimaadhaan jalamuraman irra mirga-cuqaasi, kana booda tarree irraa jecha akka bakkabuufamuuf barbaadduu filadhu, ykn baafata xiqaa irraa OfiinSirreessaa irraa filadu.
Akkasumas, Add filachuudhaan, jecha jala muraman gara galmee jechootaa maamiloo keetiitti ida'uu nidandeessa.
Jecha to'annaa qubeeffannoo irra qoqqobuuf
Jecha qoqqobuu barbadee filadhu.
Baafata banuuf, Kabala Haalojii irraa, to'attaa Afaani cuqaasi.
Galmee jechootaa haaraa uumuu.
Tarree OfiinSirreessaatti, Quxaaloota ida'uu
Title is: Ufmaan Qubeeffannoo Mirkaneessuu